I-Alps ingalahlekelwa yiqhwa layo elingu-70% ngasekupheleni kwekhulu leminyaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Alps ingalahlekelwa yiqhwa layo elingama-70% ngasekupheleni kwekhulu leminyaka
Izintaba ze-Alps, olunye lwezintaba ezibaluleke kakhulu, kungashiywa, ingxenye enkulu, ingekho iqhwa ngasekupheleni kwekhulu leminyaka Ngokusho kocwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i-The Cryosphere, uma kungathathwa izinyathelo ezinqala ukuvimbela izinga lokushisa emhlabeni jikelele ukuthi liqhubeke nokukhuphuka.
Ngakho-ke, uma uthanda ukuzijwayeza imidlalo yeqhwa, sisebenzisa isikhathi ngokunokwenzeka.
Njengoba isifundo siveza, uma isimo singaguquki, ngo-2100, kuze kuphele amaphesenti angama-70 eqhwa lasezintabeni linganyamalala, kuze kufike kuma-30% uma ukukhishwa kwegesi kuncishiswa phakathi maphakathi naleli khulu leminyaka, obekuzoba kukhulu. Umbhali ophambili walolu cwaningo, ovela eWSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF ogama lakhe linguCristoph Marty, uthe "Isembozo seqhwa e-Alpine sizokwehla noma kunjalo, kodwa ukukhishwa kwethu kwesikhathi esizayo kuzolawula kuze kube sezingeni elingakanani."
Amadolobha nezigodi eziseduze ne-Alps bathembele kakhulu kwezokuvakasha ebusika, ngakho-ke uma imvula iwa njengeqhwa, »umnotho nomphakathi wezifunda ezinezindawo zokungcebeleka zizohluphekaKusho uSebastian Schlögl, naye oqhamuka kwi-SLF.
Yize iqhwa elincane linganciphisa inani lezingozi zezimoto nokuvalwa kwesikhumulo sezindiza, Akufanele sikhohlwe ukuthi umthelela abantu abanawo kwiplanethi yoMhlaba mkhulu kakhulu. Uma siqhubeka nokungcolisa, sakha njengoba senza futhi sigawula amahlathi, kungenzeka silindele ikusasa elingathandeki neze. Empeleni, Kukhona labo abakholelwa ukuthi umonakalo esiwenzile ungeke walungiswa, nokuthi kungakuhle baqale phansi, kwaMars.
Okwamanje, abantu abanakho okunye abangakwenza ngaphandle kokuzinikela kulokho abanakho, futhi bazame ukuthatha izinyathelo ezisebenza ngempela, okungenani, ukunciphisa imiphumela engaba khona yokuguquka kwesimo sezulu.
Ungafunda isifundo esigcwele lapha (NgesiNgisi. Kuyifayela le-.pdf).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-Alps ingalahlekelwa yiqhwa layo elingama-70% ngasekupheleni kwekhulu leminyaka